यदि तपाईंंको पनि हतारमा खाना खाने बानी छ भने सावधान हुनुहोस्! « Salleri Khabar
यदि तपाईंंको पनि हतारमा खाना खाने बानी छ भने सावधान हुनुहोस्!
प्रकाशित मिति :6January, 2020
यदि तपाईं पनि छिट्टो-छिट्टो खाना खानुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् । छिट्टो-छिट्टो खाना खानाले वजन तीब्र गतिमा बढ्ने मात्र होइन मधुमेह र पाचन सम्बन्धी विभिन्न रोगहरु पनि लाग्न सक्छ । एउटा सर्वेक्षण अनुसार राम्रोसँग नचपाई छिट्टो-छिट्टो खाना खानाले तपाईको कार्डियोमेटाबोलिक (मुटु र पाचन सम्बन्धी) समस्याले स्वास्थलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
यदि छिटो-छिटो अनि खाना राम्रोसँग नचपाई खानुहुन्छ भने यो बानीले तपाईको वजन तीब्र गतिमा बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, तपाईले बिस्तारै-बिस्तारै खाना खाँदा मात्र सही मात्रामा आवश्यकता अनुसार खान सक्नुहन्छ ।
अध्ययनको अनुसार छिट्टो खाना खानाले दिमागलाई आवश्यक सन्देश प्राप्त हुँदैन । त्यसकारण आवश्यक हार्मोन्स निस्कन पाउँदैन । त्यसले गर्दा मानिसको इन्सुलिन पनि प्रभावित हुन्छ र इन्सुलिन प्रभावित भएका कारणले मधुमेह हुने खतरा बढ्छ । खाना राम्रोसँग चपाएर खानाले मुखमा भएका ब्याक्टोरियाको पनि अन्त्य हुन्छ ।
उपत्यकामा ६०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना सङ्क्रमण
अरू बेला मास्क लगाउँछन् की लगाउँदैनन् डाक्टर गाैतम ?
जीवन स्वच्छन्दताका १३ प्रफुल्ला भनाइ
जस्तो सुकै प्रतिभा भएपनी अवसरलाई छल नगर्नुहोस, अवसरवादी कमजोरी पनि दिप्तिमान महत्वाकांक्षा सवलताका ध्वतक प्रतिपादित
आज विश्वकर्मा पूजा, नगर्नुहोस् यी काम !
विश्वकर्मा पूजा, नगर्नुहोस् यी काम !